Sawirro-Dowladda dalka Uganda oo ciidamo usoo dirtay Soomaaliya. – Radio Daljir
Sawirro-Dowladda dalka Uganda oo ciidamo usoo dirtay Soomaaliya.
Luulyo 19, 2016 3:07 b 0
Muqdisho, July 19 2016--Garoonka Aadan Cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta kasoo degey cutubyo katirsan ciidamada difaaca ee dalka Uganda, kuwaasi oo bedel u noqon doona ciidamo dalkaasi kasocda oo horay u joogey dalka Soomaaliya.
Cutubyadaan ayaa katirsan ciidanka gaarka ah ee UPDF , waana ciidamo si gaar ah u tababaran waxaana ay qeyb ka noqonaya howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Howlgalka AMISOM ayaa sheegay in ciidamadan cusub la geenayo gobolka Shabeelaha Hoose, wxaaama ciidamadan badalayaan ciidamo kale oo Ugaamdhees ah kuwaa oo mudo sanad ah ka howlgalayay gobolka Shabeellaha hoose.
Wararkii ugu dambeeyey ee deegaamadii lagu dagaalamay ee Sanaag iyo Haylaan.
Puntland iyo Banaadir oo galabta ku balansan koobka maamulada.